Tobanaan qof ayaa ku dhintay markab tahriibayaal ah oo ku degay meel u dhow Liby - teles relay
Tobanaan qof ayaa ku dhintay markab tahriibayaal ah oo ku degay meel u dhow Liby
Ugu yaraan 74 muhaajiriin ah ayaa dhimatay ka dib markii uu degay markabkii ka soo raray xeebaha Libya, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay.
Samatabbixiyeyaashu waxay ku guuleysteen inay keenaan 47 qof oo ka badbaaday xeebta, shaqaalaha ka tirsan Hay'adda Socdaalka Adduunka (IOM) ayaa sidaas yidhi.
Liibiya ayaa marin muhiim ah u aheyd tahriibayaasha dalal badan oo isku dayaya inay Yurub ka gaaraan dhanka badda Mediterranean-ka.
Sida laga soo xigtay IOM, ugu yaraan 900 oo qof ayaa ku qaraqmay wadada sanadkan, halka 11 oo kalena ay dib ugu laabteen Libya, halkaas oo ay sheegtay in ay la kulmaan xarig iyo tacadiyo.
Shan tahriibayaal ah ayaa dhintay maalintii Arbacada halka 100 kalena la badbaadiyay markii doontii ay la socdeen ay kula degtay meel xeebeedka Libya ee Sabratha, meel aan ka fogeyn jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa.
Faransiisku waxay sharfayaan lix sano jir wakiil WWII iska caabin ah
Muhaajiriinta ayaa sidoo kale dhintey iyagoo isku dayaya inay gaaraan Jasiiradaha Canary ee Isbaanishka xeebaha Galbeedka Afrika. Ilaa 140 qof ayaa ku qaraqmay xeebta Senegal bishii hore markii doontii ay la socdeen dab qabsaday oo ay degtay.
Halkee buu ku burburay markabkii ugu dambeeyay?
IOM waxay ku andacooneysaa in Khamiista ay ka dhacday meel u dhow Khums ee Liibiya.
Wuxuu sheegay in doonta ay la socdeen in ka badan 120 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Ilaalada xeebta iyo kaluumeysatadu waxay keeneen kuwii ka badbaaday xeebta.
Adduunyada muhaajiriinta waxaa rogay Covid-19
Waxaa jiray ugu yaraan sagaal meelood oo muhaajiriin ah oo ku burburay bartamaha badda Mediterranean illaa 1dii Oktoobar, sida ay sheegtay IOM.
Federico Soda, oo ah Madaxa Ergada IOM ee Liibiya, ayaa yiri: “Khasaaraha sii kordhaya ee nolosha aadanaha ee badda Mediterranean-ka ayaa ah muujinta awood la'aanta dowladaha ee ah in ay qaadaan tallaabo muhiim ah oo dib loogu howlgelinayo awoodaha goobidda iyo samatabbixinta. lagamama maarmaan u ah marin biyoodka ugu dhimashada badan adduunka. "
IOM ma rumeysna in Liibiya ay tahay meel nabdoon oo ay ku noqon karaan muhaajiriinta laga soo badbaadiyey badda, iyagoo ka baqaya inay la kulmaan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, tahriibinta iyo dhiig-miirashada.
Mr Soda wuxuu yiri: "Kumanaan qof oo nugul ayaa sii wadaya inay bixiyaan qiimaha wax qabad la'aanta badda iyo berriga labadaba".
Liibiya ma aysan helin dowlad xasilloon tan iyo markii uu dhacay Muammar Gaddafi sanadkii 2011, in kastoo rajo laga qabo in wadahadalada hada socda ee ay hogaamineyso Qaramada Midoobay ay horseedi karaan dowlad ku meel gaar ah ka dibna doorashooyin.
Varadkar wuxuu kugula talinayaa inaadan wali ballansan duulimaadyada kirismaska
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii ugu horreysay: https://www.bbc.com/news/world-africa-54922965
Baarlamaanka: Xubnaha Golaha Qaranka waxaa lagu casuumay inay ku dadaalaan nabadda